[E3 2014] Microsoft ogbako recap | Akụkọ akụrụngwa
Mundi Videogames | | Ihe omume, Noticias
Bigbọchị mbụ buru ibu nke egwuregwu egwuregwu vidiyo kachasị nke afọ agwụla. Microsoft abụwo onye mbụ weghara ọnọdụ na nke a E3 2014 ma gosi egwuregwu, na naanị egwuregwu, iji gbalịa ime ka anyị kwenye nke ọdịnihu na-echere njikwa ọhụrụ ya, Xbox One.
Oge a, ọ dịghị tangles si Kinect ma ọ bụ nye okwu na-agwụ ike ebe ị ga-ewepụta data na ọnụ ọgụgụ nwere ezigbo mkpa maka ndị gamer ọha. Anyị ahụwo ọpụrụiche dịpụrụ adịpụ, egwuregwu ọtụtụ, mbughachi nke aha ukwu na ụfọdụ ihe ịtụnanya na njem: anyị na-agwa gị ihe niile ebe a, na MundiVideogames.
Ihe ngosi ahụ amalitela na ịmụmụ ọnụ ọchị Phil Spencer, ihu ọhụrụ nke ika ahụ Xbox, onye na-egbubeghị mmalite nke ngosi ahụ ogologo oge, na-edebe okwu ya: ogbako dum ga-etinye aka kpamkpam na-ekwu banyere egwuregwu vidio. Aha mbu egosiri bu Oku ọrụ: Advanced Warfare, nkeji oge na ebe anyi nwere ike ichoputa, ekele maka egwuregwu di ndu, na anyi aghaghi inwe oge nke abuo. Nnukwu agha Ọ ga-abụ ọrụ kwụ ọtọ, ebe anyị agaghị eji ngwa ọgụ na ngwa ngwa ọ bụla - dịka akpụkpọ ụkwụ na - agba ọsọ-: drones na-egbu egbu, ụgbọ agha siri ike ma ọ bụ ngwa dị egwu ga - esonye na ọgụ ahụ. N'ezie, a ga-ejikọ aka edemede na oge dị iche iche nke ụlọ na frenzied shootouts, dị ka ọ ghọrọ omenala na Oku ọrụ. na Xbox One, ọdịnaya dijitalụ ga-abata tupu nyiwe ndị ọzọ.
Dan greenawalt de Gbanyụọ Ụlọ Ahịa 10 weere ebe ahụ ma gwa anyị banyere aha Forza. Agbanyeghị na edobela echiche ahụ na aha IP ọzọ, Gbanyụọ Ụlọ Ahịa 10 echefughi Fans nke Forza 5: Malite taa, ndị egwuregwu na-anọgide na-anụ ụtọ ya ga-enwe ike ibudata free sekit nke Ịzụ ahịa. Nkwuputa ọzọ bụ nkwenye mbata nke Forza Horizon 2 el September 30 nke otu afọ a, ejiri akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa ejiri mara nke ọma na njikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
evolve, ndị chọrọ ikwenye ekwenye ọtụtụ FPS si creators nke Ekpe 4 Dead a hụrụ ya na ụgbọala na-adọkpụ ụgbọala ebe egosiri klaasị njirimara dị - naanị anọ - na ihe nnukwu anụ ọhịa dị ka ya, nke ndị egwuregwu nwekwara ike ijikwa. A ga-enwe beta n'ọdịda, ọ bụ ezie na ọ gaghị afụ ụfụ na ịnye egwuregwu ma ọ bụ ozi ndị ọzọ gbasara egwuregwu nke na-enweghị ike ịhapụ ozi n'ụzọ dị nkenke ma ọ bụrụ n'ezie na ọ chọrọ ịdọta uche ọha na eze.
Na-ekwu okwu banyere ọha na eze, usoro a maara nke ọma assassin's creed gosiri mbụ ya gameplay ọzọ gen site n'aka Ịdị n'Otu, ntọala na Ntughari aka nke French. Onye na-arụ ụgbọ ala nke afanyelarị maka ọtụtụ afọ na nnyefe abụghị ihe ijuanya, ọ bụ ezie na ihe ọhụụ nke ekwenye na usoro akụkọ maka mmadụ anọ na-egbu ọchụ Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ karịa ma nwee ike bụrụ nnukwu akụ nke nke a Assdị n'otu nke Assassin.
Ọzọ multiplatform nke a hụrụ bụ Dragọn nke Age Nnyocha. Ihe atumatu anya BioWare were ọnọdụ dị n'ụdị ihe nkiri cinematic na-eji injin nke egwuregwu ahụ eweghachi, ebe enwere ike ịhụ ọgụ megide anụ dị iche iche, gụnyere nnukwu dragon. Anyị ga-echere 7 maka October iji lelee ma ọ bụrụ BioWare oge nke a ọ mere ihe omume ụlọ akwụkwọ ya nke ọma Afọ Dragọn.
ehighị ụra nke ọma Ike gwụrụ m ikwugharị ọtụtụ oge eziokwu ahụ bụ nke na-esote Dara Overdrive -nke g'abia 28 maka October- Ọ ga - abụ egwuregwu a ga - enwe naanị ya Xbox One -Bịa na, ọ na-egosi na Microsoft abụrụla onye ji ego kwado ọrụ a. Na ụgbọala na-adọkpụ tupu egwuregwu na-egosi, anyị ahụla atụmatụ egwuregwu ahụ ngwa ngwa akọwapụtara, ebe ndị mmadụ mepụtara site na ihe ọ drinkụ energyụ ike na-eweta ọgba aghara, naanị onye ọkpụkpọ nwere ike ịkwụsị ọdachi a. Na-acha, na-enweghị atụ ma na-agbasi ike, nke a bụ otu a ga-esi kọwaa onye na-agba ụta nke atọ a, jiri oge na-egweri ya.
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị nwere ọkwa banyere mbata nke Ọnwụ Nwụrụ 3 a PC na ugbu a ọ bụ oge na-aga protagonist nke mbipute nke xbox otu, ị ga-enweta a dlc akpọ, ntị, Super Ultra Nwụrụ Anwụ Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha, ebe anyị nwere ike ejiji dị ka ihe odide akara ngosi site na ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme, na mgbakwunye na iji mmegharị pụrụ iche nke ha -ihe atụ, Ryu na hadouken- ya.
Ndị agụụ na-agụ bịara na ọkwa dị mkpirikpi nke Fantasia: Egwu etolite na nke ohuru Egwu agba, nke nyere akụkọ na anyị ga-ahụ na nke ọzọ Akụkọ ifo, nke anyị nwere ike ịkọwapụta nhọrọ nke ịkọwapụta ihe ọjọọ na ịmeghachi ọnọdụ ndị jupụtara na ndị iro na ihe egwu nke iji mee ka ihe siere ndị dike ike. A ga-enwe Akụkọ ifo akụkọ ifo ọtụtụ beta ọdịda a.
Gburugburu nọ na ogbako ahụ ma bụrụkwa ihe ọhụụ na nke kwenyesiri ike site n'igosi ụdị dịgasị iche iche nke ụdị ọ nwere ike imeghari na nsonaazụ ndị a ga-enweta: nyiwe, njem, ịgba ọsọ ụgbọ ala ... Ma dị ka njedebe, ọnụnọ nke ndị na-adịghị asọpụrụ osa Conker dị ka mgbakwunye ego na egwuregwu ahụ. Enwekwara ohere maka ndị Indies, dịka Ori: Oke nkuchi, n’ime, mbata nke Dị Ike Nke 9 a Xbox One o Cuphead n'etiti ndị ọzọ.
N'ezie, Nna-ukwu Chief ka a see okwu si - E3 2014, ọ bụ ezie na anyị enweghị egwuregwu ma ọ bụ ozi dị mkpa e nyere banyere okirikiri ọkụ n'isi 5. Kama nke ahụ, egosiputara compendium nke egwuregwu gosipụtara agwa a nke ga-abata n'okpuru aha nke Halo: Nna -ukwu nchịkọta mkpokọta, na nke ahụ ga-ejikọta n'otu mkpọ ahụ Ntughari, Halo 2, Halo 3 y okirikiri ọkụ n'isi 4, na mgbakwunye na ọtụtụ mmadụ, ya na map ya niile, nke okirikiri ọkụ n'isi 2. na Nna-ukwu Chief Collection ga-adị na 11 maka November, ga-enye ohere ịkpọ aha nke nchịkọta ahụ ọzọ ma ọ bụ na mbipute mbụ ha ma gụnye ya Halo 5: ẹkekpemede ọtụtụ mmadụ beta, nke na tiori ga-amalite na Disemba.
Geralt nke Rivia achọghị ịhapụ ogbako a ma gosipụta anyị otu esi achụ nta Witcher III: Hchụ nta anụ ọhịa. De Rivia enwewo ike ịgbaso ma lụọ nnukwu Griffo, onye mechara tufuo uche ya. Already maraworị nke ahụ Onye ojoo iii bụ ihe ọzọ na ndị greats na-aga 2015. nke abụọ oge de egbu egbu Mmuo gosipụtara na njedebe nke afọ a ma egosiri anyị maka oge mbụ ịdegharị nke agwa kpochapụwo TJ ngwakọta: onye ọkpọ na onye siri ike na-enweghị ọkpọ ma ọ bụ ebere, ga-abụ onye agha ahụ onye ọhụụ ọhụụ nke ndị agha tọhapụrụ.
Iserị elu nke Tomb raider na-enen dị ka ọzọ set nke Lara Croft, nke na niile puru omume ga-eso ụzọ malitere site na ebube camouflaged reboot ukwuu mmetụta ndị agafetụbeghị de Nkịta na-adịghị mma. Ubisoft nwetaghachiri ekele site na ngosipụta nke oge nke atụmanya ya nke ukwuu The Division, otu n'ime ụlọ ọrụ ntanetị kachasị n'ịntanetị. Nyochawa ya, ọ bụ ihe ijuanya maka oke ihe dị na ihuenyo enwere ike igosipụta n'otu oge, ọ bụ ezie na ọkwa egwuregwu ahụ, ihe a hụrụ bụ oke ọhụụ iji nwee ike ịmịpụta ìhè nke ya. Anyị ga ahụ.
Hideki kamiya, na Egwuregwu Platinum, weere ebe ahụ ma maa ọkwa aha ọ na-akwadebe naanị maka Xbox One: Scalebound ọ kọwara onwe ya dị ka onye ọbịa Monster Hunter na-eji arụ ọrụ dị elu, ọ bụ ezie na ọ bụ obere ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị nwere ike ịdọrọ dị ka nkwubi okwu site na ụgbọala na-adọkpụ ụgbọala XNUMX% CGI. N'ikpeazụ, anyị hụrụ nloghachi nke Crackdown, nke oge a ga-ebu ụzọ nweta David Jones, seasoned vetiran in companies like Rockstar y Nhazi DMA, n'ihi ya, anyị nwere ike iku ume mfe na-atụ anya na nke a mbụ aha nke Xbox 360 premiere na One na ịke.
Nke a bụ ihe kachasị mkpa anyị hụrụ na ogbako ahụ Microsoft. Ọ bụ eziokwu na Spencer edebewo okwu ya ma ha emehieghị ihe ndị mere n'oge gara aga ebe ha gbụrụ ọbụna atụrụ ahụ na eziokwu, ọnụ ọgụgụ na mmemme gbadoro anya. Kinect, naanị otu n'ime ndị na-anọghị na nzukọ ahụ, n'agbanyeghị oke ama ama ọ were na ngosi nke Xbox One. Na ikwu okwu banyere enweghị, anyị tụrụ anya ịhụ ihe ọzọ Halo 5, kwusi kwusi ma ọ bụ gịnị ka ọ na-eme Nwa tus con Kwadobe nke Agha, na-ekwughị na IP ọhụrụ dị obere na enweghị afọ ojuju. Enweghị onye chere Zuru oke Ọchịchịrị? Ndi ha kpebiri tinyere Conker en Gburugburu enweghị ihe ọzọ? Eziokwu bu na m nwere olile anya kari na ogbako a nke E3 2014, ebe Microsoft, nke na-enweta ezigbo otiti site Sony, M gaara alụ ọgụ ezé na ntu, nzọ na ndị ọzọ exclusivities na n'ezie dị oke mkpa na mgbasa ozi, na agaghị ahọrọ a ụzọ na o yiri ka conformist na ọbụna nọgidere. N'ime awa ole na ole, anyị ga-ahụ ihe asọmpi ahụ nwere aka ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » [E3 2014] Nchịkọta nke ogbako Microsoft
Etu esi ejikwa onyonyo VHD na Windows